Seenaa Abdiisaba Oromoo:-Kutaa 2ffaa – Beekan Guluma Erena
Seenaa Abdiisaba Oromoo:-Kutaa 2ffaa	Beekan Erena
Personal Category April 1, 2016January 27, 2017	5 Comments
Haala kana keessatti ani carraa barnoota argachuuf qabu harka walakkaan hir’ate. Abbaan koo maaltu na dhibe jedhee na dhiisee sokke. Anis abdii kutadhe. Yeroon Galmee barnootaa natti barfate. Abbaan koo mala biraa malateera. Obboleessa koo fidee dhufuu dhaqeera. Eessa akka namni beeku hin jiru. Guyyaa lammaffaa Obboleessa koo wajjiin dhufan. Obboleessi koo mala dhahee harmee koo jalaa na baase, M/B na galmeessan. Haala kanaan Obboleessi koo torbaan tokkoof, ganama fuudhee M/B na gessee galgala fudhee naan galaan ture. Harmeen kootis obsite ani barnoota koo haala kanaan kutaa 1-7 Mana Barumsa Garambaamoo jedhamutti baradhe. Yeroo kana harmeen koo yeroo ani M/B tii bahutti daandiirra dhaabbattee na eegdee na fudhatti ture. M/B mana jireenyaa keenyarraa km10 fagaata. Gaafa kutaa 7ffaa xumureen jijjiirraa M/Btiif waraqaa ragaa gaafadhu, hin deemtu jedhamee, koreen M/B natti murteessus, Abbaan koo akkuma gaafa haadha koo harkaa na baasetti, har’as murannoo cimaadhaan naaf gaafate. nan yaadadha guyyaa dhumarratti, dura bu’aan M/B Garambaamoo kan ture, “Dhiifama, Waraqaan ragaa Abdiisaadhaaf kennamu hin jiru.” yeroo jedhu, Abbaan koo immoo deebisee, ” Ani gaafas dhaabadhee osoo hin taane, taa’een fincaa’a.” ittiin jedheen. Ragaa osoo hin fudhatin ana fudhatee naan deeme Abbaan koo.
Bara 2005 A.L.A kutaa 8ffaadhaan gara Aanaa Dodolaa, M/B Dannabaa jedhamutti jijjiirame. Waraqaa ragaa malee ji’a 4 baradhe. Barnootaan cimaan ta’uukoo waan baraniif M/B haaraa itti dhufe kun Jaalalaf kunuunsa cimaa naaf godhuu eegalan. Gaafa ragaa fidi jedhamu, duraa na dhorkatanii dhufe, waan naaf kennan hin se’u jedheen. Barsiisaan maqaa na yaamu “hin yaadin, Mana Murtiitti himatta” naan jedhe. Osoo hin turin semisteerri waan gaheen Manni barumsa duraaniis ofumaan osoo ani hin gaafatin, Ragaan naaf ergame barnoota koo itti fufe. Qabxii gaaris galmeessee gara Barnoota Sad.2ffaa tti darbe.
Bara 2006-2007, Mana Barumsa Sad.2ffaa Dodolaatti, kutaa 9ffaafi 10ffaa
Bara 2008-2009 Mana Barumsa Qophaa’ina Dodolaattiimmoo kutaa 11ffaa fi 12ffaa
Bara 2010-2013 Yuunbaristii Haramaayaa, Damee Saayinsiif Teekinoolojii ramadamee, Barnoota Teekinoolojii Odeeffannoo(Information Technology/IT) dhaan Bara 2013 Barnoota Dirgrii 1ffaa fudhadhe.
← Seenaa Abdiisaba Oromoo
Seenaa Abdiisabaa, Eebba Boodaa:Abdiisaan Ogeessa koompiwutaraa(IT)-Ogeessi Takinooljii kun Nuuf haabarbaadamu- →
5 thoughts on “Seenaa Abdiisaba Oromoo:-Kutaa 2ffaa”	Qabsoo OromooApril 7, 2016 at 7:25 amPermalink	waan baay,een seenaa kee irraa baradhee waqnii umrii siif haa dheereessuu ..!!
Reply	ThomasbuhApril 18, 2016 at 9:42 amPermalink	Quite insightful….look forth to coming back again.
Reply	wariyoApril 28, 2016 at 3:04 pmPermalink	Abdii koo seenaa kee yeroo dubbisu wollahi imimmaan qabachuu dadhabe wollahi hiriyaa koo ta’uu keetitti baay’een gammade Rabbi ammallee guddina kee na haa dhageessisu
Reply	Dugaasa EebbisaaApril 29, 2016 at 9:22 amPermalink	waaqayyo umurii dheera fi bilisumma ciicuu hin qabne nuuf kallatti dhugaa siinis hojjechiise ija keenyatti haa argamsiisu jabaadhu goota koo ilma gudeeda oromooooo
Reply	lammii masaaySeptember 23, 2016 at 4:41 amPermalink	WAQAAYYOON.Bagaa kana kessaa sibasee!